घरबाहिर निस्कँदा मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्ने सरकारी निर्णय ठीक कि बेठीक ?
मदन केसी, काठमाडौँ
सरकारको यो निर्णय ठीक छ। हामी नेपाली जनता धेरै कुरालाई एकदमै हल्का रूपमा लिन्छौँ। ‘मास्क लगाएर के नै हुन्छ ? कोरोना लागेपनि केही हुँदैन’ भन्ने यहाँ धेरै छन्। अहिले असनचोकमा जाने हो भने मास्क नलगाउने सयौँ भेटिन्छन्। उनीहरूलाई कसरी मास्क लगाउने बनाउने त ? त्यसको एउटै मन्त्र हो, कारबाही। कारबाहीमा परिने भइयो भनेपछि डरले पनि मास्क लगाउन थाल्छन्। सरकारले कसैलाई कारबाही गरेर, सय रुपैयाँ तिराएर धनी हुन खोजेको होइन।सचेत बनाउनका लागि यस्तो कदम उठाएको हो। यसको स्वागत गर्नुपर्छ।
प्रमिता गौतम, काठमाडौँ
मास्क लगाएर मात्र कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न जानिएन भने उल्टैहानि पुर्‍याउँछ। मानिसलाई सचेत बनाउन यो निर्णय ठीक होला तर मास्कको प्रयोग गराएर कोरोना नियन्त्रण गर्छौं भन्ने सरकारको सोच गलत छ। यसका लागि अन्य कदमपनि चाल्नुपर्छ।
असीम गिरी, भक्तपुर
सरकारको यो कदम ठीक लाग्यो। अहिले धेरै मान्छेसचेत भएको देखिँदैन। उनीहरूकै स्वास्थ्यको लागि मास्क प्रयोग गर्न भनिएको हो। तर, सरकारको लागि लगाइदिनेजस्तो गर्छन्। त्यही कारणले काठमाडौँमा कोरोना बढेको बढ्ये छ। त्यसैले नलगाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मास्क नलगाउने आफू त संक्रमित हुन्छन् नै, अरूलाई पनि जोखिममा पार्छन्।
विवेक पौडेल, ललितपुर
मलाई सरकारका कुनै पनि निर्णय उचित लागेका छैनन्। क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनदेखि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने विषयमा समेत सरकार चुकेको छ। सरकारले आफूले गर्ने काममा सुधार नगर्ने अनि जनतालाई यस्तो गरिनस् भन्दै कारबाही गर्छु भन्न मिल्छ ? के नेपालका सबै जनतासँग दिनदिनै १० रुपैयाँको मास्क फेरी–फेरी लगाउने हैसियत छ होला त ? त्यसमाथि मास्क लगाउँदैमा समस्या समाधान हुने वाला पनि छैन। त्यसैले कारबाही नै गर्छु भन्नु चाहिँ गलत हो।
अर्चना दुलाल, भक्तपुर
अहिले मान्छेहरूमा कोरोनाको डर हराइसक्यो। पहिले कतै कोरोना लागिहाल्ने पो हो कि भनेर डरले मास्क लगाउँथे। अहिले वास्ता गर्न छाडेका छन्। यस्तो समयमा नलगाउनेलाई कारबाही गर्छु भनेपछि मान्छे डरले मास्क लगाउन बाध्य हुन्छन्। त्यसमाथि उनीहरूकै स्वास्थ्यका लागि बाध्य पारिएकाले यो निर्णय ठीक छ।
रक्षा पौडेल, पोखरा, कास्की
सरकारको यो निर्णय राम्रो लाग्यो। यो संवेदनशील विषय हो। यस्तो अवस्थामा मानिस आफैँ जिम्मेवार भएर मास्क लगाउनुपर्नेमा सरकारले दबाब दिनुपरेको छ। आफ्नो ज्यानको माया नभएपनि घरपरिवारका सदस्य र दिनहुँ भेट्ने साथीभाइका लागि भए पनि मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ।
विवेक थापा, तनहुँ
सरकारको यो निर्णय ठीक लागेन। हुनेखानेले दिनहुँ फेरी–फेरी मास्क लगाउन सक्छन्। तर, मजदुरी गरेर खानेलाई एक छाक टार्न पनि मुश्किल हुन्छ। उनीहरूले मास्क कसरी लगाउने ? एक दिन किनिहाले भनेपनि पसिनाले बेलुकाबाट लगाउनै नहुने हुन्छ। दैनिक किन्न सक्ने क्षमता हुनुपर्‍यो नि नेपालीको। त्यस्ता असमर्थमाथि कारबाही गर्नु कहाँको न्याय हो ?
रुकु कार्की, काठमाडौँ
जनस्वास्थ्यका हिसाबले मलाई त सरकारको यो निर्णय ठीकै लाग्यो। तर, जो गरिब छन्, जसलाई एक छाक खानपनि धौधौ छ, जसले सडकमा मागेर गुजारा चलाउँछन्, उनीहरूका लागि सरकारले मास्कको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो। अन्यथा, १० रुपैयाँको मास्क किन्न नसकेर नलगाएका जनताले सय रुपैयाँ जरिवाना कहाँबाट तिर्न सक्छन् ?
सलोन रिमाल, भक्तपुर
कोरोनाबाट बच्नु छ भने मास्क अनिवार्य छ। यसमा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन। एकजनाको लापर्बाहीले धेरै जनालाई क्षति पर्ने भएकाले सरकारको यस निर्णयको समर्थन गर्नुपर्छ। यसमा हामीलाई नै फाइदा छ।
विकास न्यौपाने, काठमाडौँ
एक त मास्कले कोरोनाबाट बचाउँछ, अर्को धुलोबाट। दुईचार पैसा खर्च गरे पनि यसका फाइदा धेरै छन्। स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी मास्क लगाऊ भन्नु त राम्रै कुरा हो। सबैले आफैँ सचेत भएर लगाउनुपर्छ। यदि सबै सचेत भएको भए अहिले कारबाहीको कुरै आउँदैनथ्यो। मलाई त यो निर्णय त्यति गलत लागेको छैन। यसले स्वास्थ्यलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ।
सुषमा घिमिरे, मकवानपुर, हेटौँडा
यो निर्णय हाम्रो सुरक्षाका लागि नै लिइएको हो। नेपाल सरकारले मात्र नभएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै मास्क लगाउन आग्रह गरेको छ। त्यसमाथि अहिले हावामा पनि कोरोना भाइरस रहन सक्ने तथ्यबाहिर आएको छ। त्यसैले पनि मास्क अनिवार्य हुन जान्छ। तर, यस्तो जटिल अवस्थामा पनि कतिपयले लापर्बाहीगरेका छन्। उनीहरूलाई तह लगाउन पनि कारबाही गर्नुपर्छ।
इशा गुरुङ, नवलपरासी
रोग लागेपछि निको हुनुभन्दा पनि लाग्नै नदिनु राम्रो हो। अहिले नेपालको कोरोनाको मृत्युदर कम भएका कारण कतिपयले हेलचेक्य्राइँ गरेको देखियो। के थाहा, लागिहालेपछि निको हुन्छ कि हुँदैन। त्यसैले सबैले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्छ। यदि कसैले लगाउँदैन भने उसले समुदायलाई नै जोखिममा पार्छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु गलत होइन।
सुरेश पौडेल, नवलपरासी
सरकारको यो निर्णयमा सहमत छु। मास्कले पूर्ण रूपमा कोरोना नरोके पनि रोक्नका लागि भूमिका खेल्छ। तर, मास्कले मात्र कोरोना रोक्दैन भनेर विभिन्न बहानामा नलगाउने कार्य गर्नु हुँदैन।आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्न मास्क लगाउनुपर्छ। मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना तिराउन थालियो भने उनीहरू सचेत हुन्छन्।